Madaxwayne Farmaajo oo ka hadlay weerarkii Al-shabaab ee Baraawe – Radio Daljir
Madaxwayne Farmaajo oo ka hadlay weerarkii Al-shabaab ee Baraawe
Abriil 13, 2018 4:28 b 0
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay dowladda inay aad uga xuntahay weerarkii shalay kadhacay degmada Baraawe ee gobolka Shabeeladeed hoose garoon kubadeed oo ay dhalinyaro ku cayaarayeen, kaasi oo afar ruux ay ku geeriyoodeen.
Madaxwaynaha oo si kulul uga hadlay weerarka ayaa sheegay Al-shabaab inay yihiin kuwa ka shaqeeya baabi’inta umadda Soomaaliyeed, weerarkana uu yahay mid ka tarjumaya dhagarta kooxda ay waddo.
“Sida aad ogtihiin Baraawe waxa ay ku qarxiyeen dhallinyaro aan waxba galabsan oo kubad iska ciyaaraya. Cadawga kaliya ee aan leenahay waa Al-Shabaab, waxaana u baahannahay wax ka yar labo sano oo aan isku duubni ula dagaalanno Alshabaab” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre oo booqasho ku tagay wasaaradda caafimaadka